चीनलाई तिब्बतमा अर्को दलाई लामा छान्‍ने हक छैन ! : अमेरिकाको चेतावनी – bampijhyala.com
Home > अन्तराष्ट्रीय > चीनलाई तिब्बतमा अर्को दलाई लामा छान्‍ने हक छैन ! : अमेरिकाको चेतावनी
३ मंसिर २०७७, बुधबार १९:२९ bampijhyala
०३ मङि्सर, बाँपीझ्याला, एजेन्सी । अर्को दलाई लामा चयन गर्नका लागि चीनसँग कुनै धार्मिक आधार नभएको भन्दै अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ ।
अमेरिकी उच्च कुटनीतिज्ञले हालै चीनप्रति यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । तिब्बतका जनताले सयौँ वर्षदेखि नै आफ्नो आध्यात्मिक नेता सफलतापूर्वक चयन गरेकोले अर्को विकल्प खोजिन नहुने उनको तर्क छ ।
सञ्चार गृह ३ मंसिर २०७७, बुधबार १९:२९
स्थानीय तहको अन्तिम बजेट आज आउँदै ३ मंसिर २०७७, बुधबार १९:२९
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने ३ मंसिर २०७७, बुधबार १९:२९
हजुरको आजको दिन, आज – १० आषाढ २०७८ बिहिवार को राशिफल ३ मंसिर २०७७, बुधबार १९:२९
फेरी बढ्यो पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य ३ मंसिर २०७७, बुधबार १९:२९